Home News Ciidamada Uganda ee Soomaaliya joogo oo taliye cusub loosoo magacaabay
Ciidamada Uganda ee Soomaaliya joogo oo taliye cusub loosoo magacaabay
Hadal ka soo baxay Wasaaradda Difaaca ee dalka Uganda ayaa lagu sheegay in Isbedel lagu sameeyey Taliska Ciiddanka Uganda ka jooga Somalia ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM.
Taliyihii Qeybta 5-aad ee Ciiddanka Uganda ee ku sugnaa Waqooyiga dalkaasi, Sarreeye Guuto Michael Kabango ayaa la sheegay in loo soo magacaabay inuu Taliye u noqdo Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM.
Taliyaha Cusub waxa uu beddeli doonaa Taliyahii Ciiddankaasi, Sarreeye Guuto Paul Lokech, kaasi oo isaga sannadkii hore xilkaasi kala wareegay Taliyihii ka sii horreeyey oo lagu magacaabo Muhanga Kayanja.
Afhayeenka Ciiddanka Uganda, Richard Karemire oo la hadlay Warbaahinta dalkiisa waxa uu xaqiijiyey Isbedelkaasi iyo Taliyaha Cusub ee loo magacaabay Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM.
Waxa uu sheegay in Taliyaha cusub, Michael Kabango xilkaasi loo magacaabay bisahan, wuxuuna xusay inuu yahay Askari Khibrad leh, kuna dheer tahay Waddaniyadda Afrikaanismka (Pan-Africanist), waa sida uu hadalka u dhigay.
Previous articleShabaab oo xukun dil ku riday sargaal ka tirsanaa Ciidamada DFS
Next articleGallan oo laga hor istaagay in uu Taageerayaashiisa kula hadlo Garoowe
Xildhibaan Xidig “Reer Galmudug Waa la idinku soo duulay Maamulkiina in...
RW Kheyre oo ay Cabsi weyn ka soo Wajahday Doorashada Barlamanka...